LUNGISA IWINDOWS AYIKWAZI UKUXHUMANA NEDIVAYISI NOMA INSIZA (I-PRIMARY DNS SERVER) - I-WINDOWS 10
Lungisa iWindows ayikwazi ukuxhumana nedivayisi noma insiza (i-Primary DNS Server)
Ukungatholi Ukufinyelela i-Inthanethi, Awukwazi Ukufinyelela Amakhasi eWebhu, Futhi usebenzisa imiphumela yenethiwekhi ye-Troubleshooter 'IWindows ayikwazi ukuxhumana nedivayisi noma insiza (i-Primary DNS Server)'. Lokho kusho ukuthi ikhompyutha yakho ayikwazi ukuxhuma kuseva eyinhloko ye-DNS esethwe ngumhlinzeki wakho wesevisi ye-inthanethi. Okubangelwe yizizathu ezahlukahlukene njenge-IPv4 yakho noma izilungiselelo ze-IPv6 ezingalungiselelwe kahle, usebenzisa iseva elibambayo, ukungqubuzana nezilungiselelo zenethiwekhi, noma lapho iseva ye-DNS ozama ukuyifinyelela ingatholakali okwesikhashana nokuningi. Noma ngabe siyini isizathu, lapha siqoqe izixazululo zokusebenza ezinhle kakhulu ukuzilungisa ayikwazi ukuxhuma kuseva ye-DNS amafasitela 10.
Okuqukethwe umbukiso 1 IWindows ayikwazi ukuxhumana nedivayisi noma insiza ezimbili Shintsha izilungiselelo zakho ze-adaptha 3 Shintshela ku-Google Public DNS 4 Setha kabusha ukumiswa kwe-Winsock ne-TCP / IP 4.1 Faka kabusha i-adaptha yenethiwekhi
IWindows ayikwazi ukuxhumana nedivayisi noma insiza
Qaphela: izixazululo ezingezansi zisebenza kumakhompyutha, ama-laptops, ama-desktops, namathebulethi asebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7. Isebenzela bonke abakhiqizi abakhulu bekhompyutha (iDell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo, Samsung).
Noma kunini lapho ubhekana nanoma iyiphi inethiwekhi ne-Intanethi, izinkinga ezihlobene, into yokuqala esincoma ukuyenza qala kabusha i-PC yakho kufaka phakathi amadivayisi wenethiwekhi (i-Router, switch, ne-modem uma kuxhunyiwe) ezilungisa uma kukhona i-gitch yesikhashana ebangela inkinga.
Okwesikhashana Khubaza isoftware yezokuphepha (Antivirus) I-VPN uma ifakiwe futhi ilungiselelwe.
Yenza ibhuthi ehlanzekile ukubheka nokuqinisekisa noma yikuphi ukungqubuzana komuntu wesithathu okungabangeli inkinga.
Sebenzisa i-optimizer yeSistimu yamahhala njengeCcleaner ukusula okungenamsoco, amafayela wesikhashana, isilondolozi sesiphequluli, amakhukhi nokulungisa okufakiwe kokubhalisiwe okuphukile.
Futhi vula umyalo ngokushesha njengomlawuli, thayipha ipconfig / flushdns bese ufaka ukhiye. Qala kabusha iWindows bese uhlola manje ukuxhumeka kwe-inthanethi kuqale ukusebenza.
Shintsha izilungiselelo zakho ze-adaptha
Uma isaqhubeka inkinga, ake sizame ukushintsha izilungiselelo zenethiwekhi / ze-WiFi:
Cindezela iWindows + R, thayipha ncpa.cpl futhi kulungile
Isikrini sokuxhumeka kwenethiwekhi sizovuleka.
Thola inethiwekhi yakho yamanje bese uqhafaza kwesokudla kuyo.
Khetha Izakhiwo kusuka kumenyu yokudonsela phansi.
Iya ku-Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4). Chofoza kunkinobho yezakhiwo.
Kanye kuthebhu Okujwayelekile, khetha Thola ikheli le-IP ngokuzenzakalela futhi Thola ikheli leseva le-DNS ngokuzenzakalela.
Chofoza KULUNGILE ukuze ushintsho luqale ukusebenza.
Ngemuva kokushintsha izilungiselelo, qala kabusha i-PC yakho bese uhlola ukuthi inkinga isixazululiwe yini.
Shintshela ku-Google Public DNS
Uma inketho engenhla ayizange ixazulule inkinga, zama ukusebenzisa i-google yomphakathi i-DNS esikhundleni sekheli leseva le-DNS okungenzeka ukuthi lilungisa inkinga. Ukuze wenze lokhu
Phinda uvule iwindi lokuxhumeka kwenethiwekhi usebenzisa i- ncpa.cpl umyalo.
Qhafaza kwesokudla kunethiwekhi esebenzayo, Khetha Izakhiwo.
Qhafaza kabili ku-Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4).
Khetha Sebenzisa amakheli e-DNS alandelayo amakheli e-Radio.
Setha iseva ye-DNS ekhethwayo ku-8.8.8.8.
Futhi i-Alternet DNS iseva ibe ngu-8.8.4.4
Chofoza KULUNGILE ukuze ulondoloze izinguquko zakho.
Manje qala kabusha i-PC yakho bese uhlola ukuxhumeka kwakho ku-inthanethi.
Setha kabusha ukumiswa kwe-Winsock ne-TCP / IP
Uma zingekho izindlela zangaphambilini ezikusizile, zama ukusetha kabusha ukumiswa kwe-Winsock ne-TCP / IP:
Vula ifayela le- inguqulo ephakeme yomyalo wakho we-Prompt .
Thayipha imiyalo engezansi bese uqinisekisa ukuthi ucindezela u-Enter ngemuva komunye nomunye:
Thayipha ukusetha kabusha kwe-netsh winsock bese ucindezela u-Enter.
Thayipha netsh int ip ukusetha kabusha bese ucindezela u-Enter.
Thayipha ipconfig / release bese ucindezela u-Enter.
Thayipha ipconfig / renew bese ucindezela u-Enter.
Thayipha ipconfig / flushdns bese ucindezela u-Enter.
Ngemuva kokuphuma kohlobo ukuvala i-Prompt yomyalo, bese uqala kabusha iWindows.
Vula isiphequluli seWebhu bese uhlola ukuxhumeka kwe-Intanethi kuqale ukusebenza.
Faka kabusha i-adaptha yenethiwekhi
Futhi umshayeli we-adaptha yenethiwekhi ophelelwe yisikhathi, ongahambelani futhi ubangela ukuthi inkinga yehluleke ukuxhumana nedivayisi noma insiza Sincoma ukuvuselela noma ukufaka kabusha umshayeli wenethiwekhi ngenguqulo yakamuva yokwenza lokhu. Njengoba i-PC yakho ingenakho ukuxhumana okusebenzayo kwe-inthanethi ukulanda oku-inthanethi nokuvuselela umshayeli we-adaptha yenethiwekhi Lets enze inketho yokufaka kabusha.
Cindezela iWindows + R, thayipha ngobe.msc futhi kulungile
Nweba i-adaptha yenethiwekhi,
Qhafaza kwesokudla kumshayeli ofakiwe khetha Khipha Idivayisi.
Chofoza u-yebo uma ucela isiqinisekiso
Qala kabusha iWindows ukukhipha ngokuphelele umshayeli
Izikhathi eziningi ekuqaliseni kabusha okulandelayo iWindows ifaka ngokuzenzakalela ukwakheka kusishayeli senethiwekhi
Uma windows ihluleka ukufaka, bese uvula imenenja yedivayisi, Isenzo bese ukhetha Skena ushintsho lwehadiwe.
Noma kukhompyutha ehlukile, Landa umshayeli wamanje we-Network adapter ye-PC yakho. Kopisha okufanayo bese usebenzisa i-setup.exe ukufaka ngesandla umshayeli. Qala kabusha i-PC bese uhlola ukuxhumeka kwe-inthanethi kuqale ukusebenza.
Ngabe lezi zixazululo zisize ukulungisa 'amawindi awakwazi ukuxhumana nedivayisi noma insiza'? Sazise kumazwana angezansi, futhi Funda Uhlelo lokusebenza alukwazanga ukuqala kahle (0xc000007b) windows 10
iTunes ayisebenzi windows 10
windows 10 ukulahlekelwa ukuxhumeka kwe-inthanethi ngezikhathi ezithile 2017
usebenzisa i-flash drive njengenqama
windows 10 internet yehla ngokungahleliwe
windows 10 ibhajwe kusikrini sokwamukela ngemuva kokuvuselelwa
windows 10 iphutha lephutha 0xc00000f
asikwazanga ukuqedela ukubuyekeza ukulungisa izinguquko windows 10